December 2017 – Heemaal News Network
Ra’iisul Wasaaraha Dowlada Federalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caawa booqday hoyga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ay shalay ciidamo ka tirsan dowlada federalka xoog ku galeen baaritaanana ka sameeyeen. Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa […]
Xisbiga Mucaaradka ee Wadajir ayaa maanta maxkamadda ciidanka qalabka sida gal-dacwadeed uga furay ciidankii iyo saraakiishii ka dambeysay weerarka u geystay xarunta urura ee magaalada Muqdisho. Xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida ayaa qabatay dacwada ay […]
Shacabka Gadoodsan Ee Dalka Iran Oo Dab-qabadsiiyay Sawirada Ayatollah Khamenigii la Ixtiraami-jiray.
Waxaa sii kordhaya isku dhacyada booliiska iyo dibadbaxayayaasha dalkaasi Iiraan. Muqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya ugu yaraan 2 qof oo lagu toogtay magaalada ku taalla galbeedka dalkaasi ee Dorud. Magaalada Abhar, oo ku […]
Gudoomiyaha Maxkamada Boorama Oo ka Waramay Kiisaskii Ugu Adkaa Ee soo Maray Sadankan Dhamaaday.
Sheekh Cabdiqaadir Jaylaani Oo Siwayn Looga Xusay Magaalada Hargaysa.